Aragtiwanaagsan.com – Nin afar xaas leh oo wareysi laga qaaday!!
Mar 27, 2019 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Qof Muhiim ah, Wararka 0
wariyad.waa kuma ninkan ila hadlaaya?
Adeer!..imisa naagood ayaad leedahay?
Xasan.Afar naagood ayaan hadda dambaabaa…ilaahaybaa mahad leh.
Wariyad. Waayoaragnimaddaada manala wadaagi kartaa?
Xasan.Ragga waxaan kula talinayaa in ay g uursadaan…seddex iyo afar ba.waayo in aad la dhaqanto afar naagood…waxay ka dhigantahay sidii qof la dhaqmaaya….shirkadaha duulista iyo isgaadhsiinta.waayo tartan ayaa markasta ka dhaxeeya kaas oo adag.
Wariyad. Adeer..bal ka waran ninka ku eekaada gabadh kaliya..?
Xasan.ninka gabadh qudha ku eekaadaa..waa..sidii nin la dhaqma shirkad leydh oo kaliya…leydh markasta lagaa jaraayo…iyo juwan qaaliya!! wuxuu ahaa wareysi rayiga dadweynaha oo wariyad suudaaniyad ahi…qaaday.
Wasaaradda Arrimaha dibadda dalka Masar oo qaabishay wafti ka socday Wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland! Hantida ugu qaalisan ee uu leeyahay ciyaaryahanka Kiristiyaano Roolaando!!